macOS Archives | Pyae Heinn Kyaw's Blog
Call Recording ပါမယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ iOS 14 က ဘယ်နေ့မှာ တရားဝင်ကြေငြာမှာလဲ?
Apple, iOS, iPadOS, macOS, News, watchOS / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE iOS User တွေစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ iOS 14 ကိုတော့ Apple က လာမယ့်ရက်ပိုင်းအနည်းငယ်အတွင်းမှာ မိတ်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ် .. Apple ဟာ iOS အပါအဝင် watchOS, macOS, tvOS အစရှိတဲ့ Apple Devices တွေရဲ့ Operating System generation အသစ်ကို WWDC မှာ မိတ်ဆက်လေ့ရှိပါတယ် WWDC ဆိုတာကတော့ Worldwide Developer Conference ကိုပြောတာဖြစ်ပြီး Apple ကနှစ်စဥ်ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ ပွဲတခုဖြစ်ပါတယ် .. ဒီပွဲကို Apple Developer Program ရဲ့ Member တွေပဲတက်ရောက်လို့ရတာဖြစ်ပြီး လက်မှတ်ခကတော့ $1,600 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ် .. ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လဲ Scholarship နဲ့ ပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် …
Call Recording ပါမယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ iOS 14 က ဘယ်နေ့မှာ တရားဝင်ကြေငြာမှာလဲ? Read More »
Apple, HowTo, Knowledge, MacBook, macOS / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE Apple အနေနဲ့ macOS Catalina မှာ Font အသစ်များစွာရဲ့ License တွေကိုဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် .. ဒါပေမယ့် အဆိုပါ Font တွေဟာ macOS Catalina မှာ Download လုပ်ပြီးသားအနေအထားနဲ့ပါလာတာမဟုတ်လို့ မိမိကိုယ်တိုင် Download ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် Typography ကနေပြောကြားချက်အရ အဆိုပါ System Fonts အသစ်တွေဟာ Commercial Type, Klim Type Foundry and Mark Simonson Studio တို့လို Type Foundries တွေကနေ License ဝယ်ယူထားတာပါ .. ပါဝင်လာတဲ့ Font အသစ်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ Font အသစ်တွေကို Install လုပ်ချင်ရင် အရင်ဆုံး …
macOS Catalina ရဲ့ Font အသစ်တွေကို Free Download ပြုလုပ်နည်း Read More »
MacBook အသုံးပြုရာမှာ ပိုမိုလွယ်ကူ အဆင်ပြေချောမွေ့စေမယ့် Tips & Tricks 12 ခု (Part 2)
Apple, Knowledge, MacBook, macOS / By Pyae Heinn Kyaw
🚨 ဒီ Article ကို Copy ကူးချင်ရင် PHK Knowledge Sharing ကို Credit ပေးကြပါခင်ဗျာ 🚨 Part 1 ကိုတော့ ဒီ Link ကနေ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် .. https://www.pyaeheinnkyaw.tech/macbook-tips-and-tricks-first-part .. အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ .. ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ MacBook တွေကို ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အသုံးပြုရာမှာ အထောက်အကူပေးတဲ့ Tips & Tricks 12 ခုကို Sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် .. ဒီ Article မှာ Part2အနေနဲ့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ Tips & Tricks6ခုကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 7. Import from …
MacBook အသုံးပြုရာမှာ ပိုမိုလွယ်ကူ အဆင်ပြေချောမွေ့စေမယ့် Tips & Tricks 12 ခု (Part 2) Read More »
MacBook အသုံးပြုရာမှာ ပိုမိုလွယ်ကူ အဆင်ပြေချောမွေ့စေမယ့် Tips & Tricks 12 ခု (Part 1)
UNICODE 🚨 ဒီ Article ကို Copy ကူးချင်ရင် PHK Knowledge Sharing ကို Credit ပေးကြပါခင်ဗျာ 🚨 အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ .. ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ MacBook တွေကို ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အသုံးပြုရာမှာ အထောက်အကူပေးတဲ့ Tips & Tricks 12 ခုကို Sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် .. လောလောဆယ် ဒီ Article မှာ Part 1 အနေနဲ့ Tips & Tricks6ခုကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 1. Volume/Brightness Adjustment from Touch Bar Touch Bar ပါတဲ့ MacBook တွေကိုကိုင်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် …
MacBook အသုံးပြုရာမှာ ပိုမိုလွယ်ကူ အဆင်ပြေချောမွေ့စေမယ့် Tips & Tricks 12 ခု (Part 1) Read More »
2020 မှာ Apple ဆီကဘာတွေမျှော်လင့်လို့ရမလဲ?
Apple, Apple Watch, iOS, iPad, iPadOS, iPhone, MacBook, macOS, watchOS / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE 2019 မှာ Apple က မလုပ်စဖူးအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ် .. Customer feedback တွေကိုနားထောင်ခဲ့ပြီး customer အလိုကျ ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် ဥပမာပြောရရင် iPhone 11 Series မှာ Battery ပိုခံအောင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး 16-inch MacBook Pro တွေမှာလဲ Butterfly keyboard switch တွေအစား scissor keyboard တွေကိုပြန်လည်သုံးစွဲပေးခဲ့ပါတယ် အခုတော့ 2020 မှာ Apple ကဘာတွေထုတ်လုပ်သွားဦးမလဲဆိုတာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 1. iPhone SE22020 အစောပိုင်းမှာ Apple က iPhone SE မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်တဲ့ iPhone SE2ကိုမိတ်ဆက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ် .. ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးကတော့ …
2020 မှာ Apple ဆီကဘာတွေမျှော်လင့်လို့ရမလဲ? Read More »
iDevice ကိုင်ထားသူတိုင်း အသုံးပြုသင့်တဲ့ iMessage ကို Pro ကျကျသုံးနည်း
Apple, Apple Watch, HowTo, iOS, iPad, iPadOS, iPhone, Knowledge, MacBook, macOS, watchOS / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE iMessage ဆိုတာ iOS5ကနေစပြီးပါဝင်လာခဲ့တဲ့ Instant Messaging service တမျိုးပါပဲ .. အနီးစပ်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် Facebook ရဲ့ Messenger နဲ့တော်တော်လေးတူပါတယ် .. ဒါပေမယ့် iMessage က Messenger ထက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာတွေရှိနေပါတယ် .. ဘာတွေပိုကောင်းလဲကြည့်လိုက်ကြရအောင် iMessage ကို Apple ကထုတ်ထားတဲ့ iDevice အချင်းချင်းပဲပို့လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် .. Android မှာသုံးလို့ရအောင်လဲ နည်းလမ်းတော့ရှိပါတယ် .. နောက်မှသေချာတင်ပေးပါတယ်.. iMessage သုံးမယ့်လူတွေဟာ Settings > Messages > iMessage ကို သွား on ပေးထားရပါမယ် .. ပို့တဲ့အခါမှာလဲ Country Code ခံပြီးပို့ရမှာပါ မြန်မာဖုန်းနံပါတ်တွေဆို 09… အစား …
iDevice ကိုင်ထားသူတိုင်း အသုံးပြုသင့်တဲ့ iMessage ကို Pro ကျကျသုံးနည်း Read More »
MacOS Catalina ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲချက် 8 ချက်
Apple, Knowledge, macOS, News / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE ONLY MacOS Catalina official version က October7ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာခဲ့ပြီး Mac သုံးတဲ့လူတော်တာ်များများလဲ Update လုပ်ထားကြပြီလို့ထင်ပါတယ် .. အခုအခါမှာတော့ MacOS Catalina မှာပါဝင်လာတဲ့ features အသစ် 8 ချက်ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 1. Official ZawGyi/Unicode Support System Preferences > Language & Region မှာ မြန်မာစာကို add လုပ်ပြီး မြန်မာစာဘေးမှာပေါ်နေတဲ့ (i) icon လေးကိုနှိပ်ပြီး Unicode (Standard) ဒါမှမဟုတ် ZawGyi ကိုရွေးနိုင်ပါပြီ Keyboard ထဲမှာလဲ Burmese Keyboard ပါဝင်လာပြီး Unicode support လုပ်ပါတယ် 2. …
MacOS Catalina ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲချက် 8 ချက် Read More »
iOS 13 မှာပါဝင်လာမယ့်, Offline ဖြစ်နေရင်တောင် မိမိဖုန်းကိုရှာလို့ရမယ့်, Find My function ကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ခြင်း
Apple, Apple Watch, Cyber Security, iOS, iPad, iPadOS, iPhone, Knowledge, MacBook, macOS, watchOS / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE ပထမဆုံးပြောချင်တာက ဒီ article ဟာ tech နဲ့ရင်းနှီးမှုမရှိတဲ့ သာမန်လူတွေအတွက်နားလည်ဖို့ခက်ပါတယ် … ဒါပေမယ့် လူတိုင်းနားလည်လွယ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးရေးသားထားတာဖြစ်လို့ အဆုံးထိဖတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ WWDC 2019 မှာ iOS 13 နဲ့ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ features တွေကိုမိတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ် .. iOS 13 Official release လဲထွက်နေပါပြီ .. iOS 13 မှာ Find my iPhone နဲ့ Find my Friends တို့ကို Find My ဆိုပြီးပေါင်းစပ်လိုက်ပါပြီ ဒီ Find my function ဟာ Offline အလုပ်လုပ်တာဖြစ်လို့ ဖုန်း/ကွန်ပျူတာပျောက်သွားရင်တောင် Tracking လိုက်နိုင်ဖို့ chance တော်တော်များသွားပါပြီ .. …
iOS 13 မှာပါဝင်လာမယ့်, Offline ဖြစ်နေရင်တောင် မိမိဖုန်းကိုရှာလို့ရမယ့်, Find My function ကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ခြင်း Read More »